वैदेशिक रोजगारी र नेपालको समृद्धि – Sajha Bisaunee
वैदेशिक रोजगारी र नेपालको समृद्धि
। २४ श्रावण २०७४, मंगलवार १५:४९ मा प्रकाशित
वैदेशिक रोजगारी कतिपय नेपाली युवाहरूको रोजाई हो भने कतिपयको बाध्यता । पछिल्लो समय हजारौ युवायुवतीहरू त्रिभुवन विमानस्थलबाट बैदेशिक रोजगारका लागि बाहिरिने गर्दछन् भने त्यत्तिकै संख्यामा वैदेशिक रोजगारका लागि गएका युवायुवतीहरू स्वदेशमा भित्रिने गरेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा युवायुवतीहरूकोको ओहोर–दोहोर गरेको दृष्य हेर्दा एउटा रहर जस्तो देखिन्छ तर बैदेशिक यात्रामा जानु र फर्कनु रहर नभएर म जस्ता लाखौं युवायुवतीहरूको बाध्यता र विवशता हो ।
रोजगारीको खोजीमा नेपाली युवाहरू विभिन्न देशहरूमा जाने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारका लागि अहिले युवायुवतीहरूको बाध्यताभित्र रहेर पनि आकर्षणको केन्द्र बनिरहेको देखिन्छ, दक्षिण कोरिया । जसले हालै मात्र ईपीएस प्रणालीमार्फत् लगिएको ८ औं भाषा परीक्षाको परिक्षाफलको नतिजा सर्बजनिक गर्दै १२ हजार एक सय ६८ जना कोरियन भाषामा योग्य रहेको र कोरियाका साना तथा मझौला कम्पनी र कृषि क्षेत्रमा काम गर्न दक्ष रहेको ठहर गरेको छ । हालसम्म दक्षिण कोरियामा ४४ हजार नेपालीहरूले औद्योगिक र कृषि क्षेत्रमा नेपाली कामदारको रूपमा काम गर्दै आएका छन् । दक्षिण कोरिया नेपालीहरूको संख्या बढिरहेको छ । अर्कोतर्फ दक्षिण कोरिया पुगेका नेपालीहरूको मृत्युको घटना पनि बढिरहेका छन् । पछिल्लो समय दक्षिण कोरियामा एक सय २० जना नेपाली युवाहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यस्ता घटना दिनहुँजसो भइरहेका छन् ।
कोरिया भन्ने बित्तिकै सुरक्षित र भरपर्दो वैदेशिक गन्तव्यको रूपमा लिने गरिन्छ । यहाँका कामदारहरूका लागि मासिक तलब पनि सामान्यतया अन्य देशको तुलनामा उच्च रहेको छ । यसैले पनि पछिल्लो समयमा दक्षिण कोरिया युवायुवतीहरूको सबैभन्दा पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेको छ । कोरियन भाषा ईपीएस प्रणालीबाट पास गरेपछि कोरिया प्रवेशका सबै चरणहरू कोरियन कम्पनीले गर्ने भएता पनि भाषा पास भएपछि कति समयभित्र कोरिया प्रवेश गराइन्छ भन्ने जानकारी कहींकतैबाट आजसम्म पात्ता लाउन सकिएको छैन । तर एक पटक भाषा पास गरिसकेपछि दुई वर्षभित्र कोरिया प्रवेशका लागि अवधि राखिएको हुन्छ । दुई वर्षभित्र पनि कोरिया जान पाइएन भने कोरिया प्रवेशका लागि तोकिएको समय अवधि समाप्ती हुन्छ । त्यसपछि कोरिया जानका लागी पुनः भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ । सन् २०११ मा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका सबैलाई कोरियामा प्रवेश गराइएको थिएन । निर्धारित संख्या भन्दा धेरैलाई उत्तीर्ण गरेछ भने यस्तो समस्या आउने गर्छ । अहिले भने भाषा उत्तीर्ण गरेका शत प्रतिशतलाई कोरियमा प्रवेश गराउने कोरियन सरकारले प्रतिबद्धता गरेको छ । त्यसैले सन् २०११ पछिका वर्षहरूमा स्वास्थ्य अवस्था र उमेर हदका कारणले भाषा पास गरेकालाई कोरिया प्रवेशमा रोक लगाइएको भएता पनि त्यो बाहेकका अरू सबैलाई सकेसम्म कोरियामा पु¥याइएको छ ।
सुर्खेतको सन्दर्भमा भाषा पास गरिसकेपछि त्यसबाहेक पछिल्लो चरणहरू के–के हुन् ? कहाँ–कहाँ र के–के गर्नुपर्छ ? भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भइसकेपछि कोरिया प्रवेशका लागि छिटो गर्नका लागि के–के तरिका अपनाउन पर्छ ? भनेर भाषा पास गरिसकेपछि कोरियान भाषा अध्ययन गरिएको इन्स्टिच्यूटमा गएर विस्तृत जानकारी लिन सकिन्छ ।
खासमा कोरिया पुगेर ६ वर्ष सफलतापूर्वक पार गरिसकेपछि स्वदेश फर्किदा सीप र अर्थ बोकेर फर्किन्छ । आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न आर्थिक र सीप कमाएर फर्किका युवाहरूका लागि नेपाल सरकारले स्वदेशमै लगानीको वातावरण बनाइदिनु आवश्यक छ । स्वदेशमै लगानी गरी सीपको सदुपयोग गराउन सरकारले सक्ने हो भने देशको विकासमा टेवा पुग्नेछ । देशको मुहार फेरिनेछ । देश विकासमा पनि कोरिया बाहेक अन्य देशमा गएका हजारौ म जस्तो युवायुवातीहरूले ठूलो योगदान गर्नेछन् । अहिले पनी राज्य सञ्चालनका लागि रेमिट्यान्सको भर गनुपर्छ । भोलिका दिनमा विदेशिएका युवाहरूको सही सदुपयोग राज्यले गर्न सक्यो भने रेमिट्यान्सको भर पर्नुपर्ने छैन । आखिर यसरी नै रेमिट्यान्सको भर परेर सरोकारवाला निकायहरू चुपचाप बस्ने हो भने मेरो देशको विकास सयौं वर्ष पछाडि धकेलिने छ । म जस्तो लाखौं लाख युवायुवातीहरू दक्षिण कोरिया या कुनै खाडी मुलुक, जापान, युरोप, अमेरिका जस्ता देशहरूमा रोजगारका लागि आजको दिन जसरी नै सयौं वर्षसम्म भौंतारिनु पर्नेछ । यदि यो क्रम रोकेर एक पटक वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्किएकालाई सुरक्षित लगानी गर्ने ठाउँको प्रबन्ध भयो भने सीप र अर्थ बोकेर स्वदेश फिरेका म जस्ता लाखौंले देशको भविष्य फेर्ने थियो देशको अनुहार फेर्ने थियौं । कोरियन भाषा उत्तीर्ण गरीसकेपछि म चार वर्ष १० महिनापछि देश र राष्ट्रको नाममा केही गर्ने छु भन्ने आफू र राष्ट्र बनाउने जिम्मेवारी आफ्नो काधमा छ सोचेर दक्षिण कोरियामा र अन्य देशमा वैदेशिक रोजगारका लागि पुगेका युवायुवतीले ध्यान दिनु जरूरी छ । यदि यसो भयो भने हाम्रो जीवनशैली समृद्ध त बन्ने नै छ देश पनि समृद्ध बन्नेछ ।
(चौकुने गाउँपालिका ४ सुर्खेत स्थानीय घर भएका
लेखक हाल दक्षिण कोरियामा छन् ।)